Akụkọ - factorylọ ọrụ ihe na-emetụ Nissha aka na-agbanye kwa ụbọchị! Mmetụta ọrịa ahụ nwere oke, yana amụma ego H1 ga-ebili
Mmetụta nke pneumonia coronavirus (COVID-19, nke a na-akpọkarị pneumonia ọhụrụ) na-agbasa, Nissha, nnukwu ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ aka, tụgharịrị site na ọnwụ na uru ikpeazụ nkeji iri na ise. Ma bulie amụma maka akụkọ gbasara ego H1 nke afọ a, Kpalite ọnụahịa ngwaahịa na-ebili oke kwa ụbọchị.
Dabere na nkwupụta Yahoo Finance, site na 8:44 nke ụtụtụ na 14th, Nissha rutere 18.16% na 976 yen, njedebe kwa ụbọchị na-agbanye ọkụ, ọ rutere ọkwa ọhụrụ dị ọhụrụ kemgbe February 21.
Nissha kwupụtara ọkwa ikpeazụ nke ọnwa ikpeazụ (Jenụwarị-Machị 2020) mgbe ahịa ngwaahịa ndị Japan na 13th: Mmetụta nke ọrịa ọhụụ ọhụrụ nke pneumonia nwere oke, Ihe a chọrọ maka ogwe aka maka ama / mbadamba siri ike, Enwetara ego zuru ezu site na 8.4% site n'otu oge n'afọ gara aga na 39,474 ijeri yen, Uru arụmọrụ agbakọtara na-egosi ịba uru nke azụmaahịa agbanweela site na ọnwụ nke ijeri yen 2,458 na otu afọ gara aga gaa njupụta nke yen 1.082. Ego uru agbakọtara, nke gosipụtara uru ikpeazụ, tụgharịkwara site na ọnwụ nke ijeri yen 2,957 n'otu oge ahụ n'afọ gara aga gaa na njupụta nke 870 nde yen.
Nissha akụrụngwa nkewa (aka panel division) enwetara na nkeji iri na ise toro site na 16.4% site n'otu oge n'afọ gara aga na 19.536 ijeri yen, uru ọrụ bụ 1.659 ijeri yen (arụ ọrụ ọnwụ 2.109 ijeri yen n'otu oge n'afọ gara aga); Ego ha ritere na ngalaba teknụzụ ahụike (gụnyere ngwa ahụike na ngwaahịa ndị metụtara ya) dara 7.3% rue ijeri yen 5.7, na uru ọrụ ritere site na 48,7% rue nde 214.
Nissha kwuru, Ọ bụ ezie na oyi baa ọhụụ ọhụrụ mere ka ọchịchọ maka ụfọdụ ngwaahịa dị ala karịa ka a tụrụ anya ya, Otú ọ dị, ọchịchọ maka ogwe aka maka mbadamba nkume dị mma karịa ka a tụrụ anya ya, Ya mere, afọ a H1 (Jenụwarị-June 2020) ngụkọta ego ha nwetara nwere emezigharịrị site na atụmatụ mbụ nke ijeri yen 75 na yen ijeri 77, na mwepu nke arụmọrụ gbadara ala site na atụmatụ mbụ nke ijeri yen 6 ruo ijeri ụbọchị 4. Egola Yuan na mwepu net mwepu ruru ijeri yen 5,2 site na ijeri yen 6,9.
Nissha degharịrị ihe ntinye aka ya na H1 site na ijeri yen 32.7 ruo yen ijeri 39,2.
Nissha kwuru, na oge a (Eprel-June 2020), a na-atụ anya na ndị chọrọ mmetụ aka maka ama na mbadamba ga-abawanye n'otu oge ahụ n'afọ gara aga. a na-eme atụmatụ ịba ụba site na 7% kwa afọ na 19.664 ijeri yen.
Nissha na-ekwusi amụma amụma ego ya maka afọ a (Jenụwarị-Disemba 2020) agbanweghị; Onu ogugu ga-ebelata site na 4.6% kwa afọ na 166 ijeri yen, ọnụọgụ arụmọrụ na-eme atụmatụ na ijeri yen 2, na ọnụọgụ gbakọtara ọnụ na-eme atụmatụ na 3.5 ijeri yen .